Izindatshana zikaMatthew Schmoldt Martech Zone |
Imibhalo nge UMathewu Schmoldt
UMatthew Schmoldt ubelokhu eyi-Internet Marketer kusukela ngo-2009. Ungumsunguli we obhokhanbuyine.com, indawo lapho enza imilolotelo ngemikhiqizo emangalisayo.
Ngokuya nge-Youtube, amahora angama-72 wevidiyo alayishwa njalo ngeminithi! Abasebenzisi be-Twitter babhala ama-tweet izikhathi ezingama-400 ngosuku. Ezweni eligcwele umsindo, kunzima ukuthi umkhiqizo, iwebhusayithi, noma insizakalo izwakale. Kuba nzima nakakhulu uma kungekho lutho oluhlukile ngempela ngento emakethwayo. Nsuku zonke, abathengisi babhekana nenselelo yokwenyuka ngomsindo. Ngethemba lokuvuselelwa kokudala, ngiphendukela ku-2009